Marka aynu nidhaahno video waxay noqotay qayb muhiim u ah nolol maalmeedkeena, kaftamayn mayno. Waxaan ka daawanaa fiidiyowyada internetka maalin walba kombuyuutarradeena, taleefannadeenna iyo xitaa Smart TV-yada. Sida laga soo xigtay Youtube, tirada saacadaha ay dadku ku qaataan daawashada fiidiyowyada ayaa sanadkii ka badan 60%!
Degellada ku saleysan qoraalka oo keliya ayaa noqday kuwo duugoobay, annaguna kaligeen ma nihin kuwa dhahaya: Google waa! Mashiinka raadinta # 1 ee adduunka ayaa ahmiyad sare siiya waxyaabaha fiidiyowga ka kooban, kaas oo leh 53x fursado badan ka soo muuqashada boggeeda koowaad marka loo eego degellada qoraalka ku saleysan. Sida laga soo xigtay Falanqaynta isbeddellada Cisco, marka la gaaro sanadka 2018 fiidiyowgu wuxuu ka dhigayaa 79% dhammaan taraafikada internetka, halka ay hadda ka tahay 66%. Ganacsiyada waa in loo diyaar garoobaa tan iyo markii kor u kaca fiidiyowga ee internetka ma ahan inuu gaabis ku yimaado waqti dhow.
Halkan waxaa ah fiidiyow sharraxe ah oo aan ka soo saarnay Cord Blood Banking, oo ah mowduuc aad u adag oo si fudud loo adeegsaday fiidiyow sharraxa:
Maxay tahay sababta fiidiyeyaasha sharraxa wax ka beddel ku sameeyaan ololaha suuq-geynta gudaha? Aynu raacno tallaabooyinka caadiga ah ee suuq-geynta gudaha si aan u aragno sida ay tahay Video Sharaxa waxay kobcin kartaa dadaalkaaga suuq-geynta adoo adeegsanaya xog dhab ah:
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ganacsiyada khadka tooska ah laga helo ayaa ah sida loo soo jiito dadka booqda khadka tooska ah ee bogaggooda, si kale haddii loo dhigo, sida loo kala safto bogagga ugu horreeya ee Google. Waan ognahay in fiidiyowyada ama bogagga leh fiidiyowyadu ay leeyihiin fursad aad uga wanaagsan oo lagu qoro bogga ugu horreeya ee natiijooyinka raadinta bogagga qoraalka ku saleysan. Si fudud haddii loo dhigo, way ka fudud yihiin dheefshiidka iyo wadaagga - iyaga oo ka dhigaya waxyaabaha ugu habboon ee lagu hagaajinayo heerkaaga guud.
Fiidiyowyadu waa hub aan qarsoodi ahayn oo loogu talagalay SEO (hagaajinta mashiinka raadinta). Falsafadda Google waxay muddo dheer ahayd inay iyaga u hesho waxyaabaha ugu faa'iidada badan uguna xiisaha badan iyaga; waxayna aqoonsadeen in baarayaashu ay jecel yihiin fiidiyowyo madadaalin kara oo wax bari kara. Tani waa sababta Google si caqli-gal ah ugu abaalmariyo boggaga internetka waxyaabaha fiidiyowga iyaga oo ku daraya iyaga ka sarreeya. Mashiinka raadinta wuxuu u tixgeliyaa fiidiyowga inuu yahay mid ka mid ah qaababka ugu xiisaha badan ee ka kooban qadka tooska ah wuxuuna ujeedkiisu yahay qancinta adeegsadayaasheeda iyadoo inta badan la soo bandhigayo fiidiyowyo marka hore natiijooyinka raadinta. Layaab malahan sababta ay Google u iibsatay Youtube, shabakada bulshada ee fiidiyowga lagu dhaqo oo sidoo kale ah # 2 aduunka ee loo isticmaalo mashiinka raadinta.
Hagaag, hada waxaad ku kordhisay booqashooyinkaaga fiidiyow sharaxe ah, sidee ugu soo rogi kartaa martidaas hogaamiyeyaal? Fiidiyeyaasha sharraxaya ayaa u oggolaanaya astaantaada inay samatabbixin garoonka kaamil ah mar kasta. Waqtiguna waa cunsur muhiim ah. Celceliska dareenka aadanaha ee websaydhka qoraalka ku saleysan wuxuu ku saabsan yahay 8 ilbidhiqsi, ka hooseeya dareenka dareenka kalluunka dahabka ah! Si aad u soo jiito xiisaha booqdayaashaada, waa inaad si deg deg ah oo wax ku ool ah u gaarsiisaa farriintaada. Kaliya maahan soo jiidashada iyaga, sidoo kale waxay ku sii kordhineysaa inay sii joogaan waqti ku filan si ay u fahmaan soo jeedintaada ganacsi.
Fiidiyow sharaxe ah oo la dhigay korka laaban bogga soo degitaankaaga natiijooyinka booqashooyinka sii kordhaya laga bilaabo bilowga 8 ilbiriqsi illaa 2 daqiiqo isku celcelis. Taasi waa kobcin 1500% ee hawlgelinta! Waana waqti ku filan fiidiyowga inuu u gudbiyo farriintaada isla markaana u kaxeeyo dhagaystayaashaada inay tallaabo qaadaan. Adeegsiga wicitaan-wax-ku-ool ah oo ka socda fiidiyowgaaga ayaa u kaxeyn kara booqdayaasha inay iska diiwaangeliyaan warside, iska diiwaangeliyaan tijaabo bilaash ah, codsadaan la-talin, ama soo degsadaan eBook. Fiidiyowyaashu waxay u rogaan martida inay noqdaan hoggaan u qalma.
Waxaan horeyba u cadeynay sida fiidiyowyada xayeysiinta ah ee firfircoon ay u soo jiitaan dadka soo booqda oo ay ugu rogaan hogaamiyeyaal, markaa hadda waxaan u nimid tirooyinka ka dhashay ee ugu muhiimsan ganacsiga kasta ee internetka: iibka.
Fiidiyow sharaxe ayaa ah qaybta ugu badan ee laga wadaagi karo internetka, taasina waa waxa ka dhigaya hantida ugu fiican ee macaamiishaadu ay kugu dhiirrigeliyaan kanaalladooda warbaahinta bulshada. Tusaale ahaan, waa kuwan fiidiyow sharaxe ah oo gaadhay ku dhowaad 45 kun booqashooyinka Youtube kaliya: